Praiminisitra Ravelonarivo : « Milamina ary tsy manana olana amin’ny filoha aho » | NewsMada
« Milamina tanteraka ny fifandraisanay sy ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Tsaho ny filazana fa tsy mifankahazo izany izahay. Tsy mitombina izany », hoy ny Praiminisitra Ravelonarivo Jean, omaly teny Mahazoarivo. Nambarany fa mitohy hatrany ny asa ka anisan’izany ny fidirana amin’ny 100 andro fahatelo.
« Miandry ny fankatoavana azy sisa ny Rindra safatsiroa ho an’ny sehatry ny filaminana sy fandriampahalemana (RSS). Tsy ho ela intsony ny hampiharana azy satria hiantoka ny fampandrosoana izany filaminana sy fandriampahalemana izany », hoy Notsiahiviny fa efa voafaritra ao anatin’io RSS io avokoa ny paikady rehetra momba izany.
Na izany aza, mbola hangatahana fanohanana sy fanampiana avy amin’ny sehatra iraisam-pirenena izany mialoha ny tena hampiharana tanteraka azy, araka ny nambarany ihany.
Tsiahivina fa nanamarika ny andron’ny manamboninahitra lefitra ny teny Mahazoarivo ka nohararaotin’ny Jly Ravelonarivo Jean nanafatrafarana ireo miramila teny an-toerana izany. « Matoky anareo ny fitondrana. Ny tenako koa anisan’ny ao anatiny. Tohizo ny asantsika na tsy mora aza, amin’ny fiarovana ny andrimpanjakana », hoy izy.
Nambarany fa anisan’ny hery ho an’ny fampandrosoana ny manamboninahitra lefitra ary tokony handala mandrakariva ny fitiavan-tanindrazana.